ထွန်းမြင့်၊ ဦး (ဒဂုန်) - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ ဒဂုန် ဦးထွန်းမြင့် [၁၉ဝ၈ - ၁၉၇၂]
၃ ထင်ရှားသည့် စာအုပ်အချို့
ဒဂုန် ဦးထွန်းမြင့် [၁၉ဝ၈ - ၁၉၇၂]ပြင်ဆင်
ပဲခူးတိုင်း၊ ကဝမြို့နယ်၊ လသာကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ မယ်သီလှကန်ရွာ၌ အဖ လယ်သမားကြီး ဦးမောင်ဖေ၊ အမိ ဒေါ်နှင်းရည် တို့က ၁၉ဝ၈ ခု ဇွန်လ ၂၇ ရက် စနေနေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းသုံးယောက်တွင် ဒုတိယသားရတနာ ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးထွန်းမြင့် ဖြစ်သည်။
၁၉၂၀-ခုနှစ်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ လဟာရက်ရွာကျောင်းဆရာတော် ဦးပဏ္ဍိစ္စထံတွင် အသက် ၁၃ နှစ် အရွယ် ကိုရင်ဝတ်နှင့် အခြေခံပညာ သင်ယူဆည်းပူးသည်။ ကိုရင်ဘွဲ့မှာ 'ရှင်တေဇောသာရ' ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဗဟန်း ဗင်္ဂလားတိုက် အုတ်လှေကား ကျောင်းတွင် နေပြီး၊ ဗင်္ဂလားတိုက် စကားဝါပင်ကျောင်း ဆရာတော် ဦးအရိယဝံသ ထံတွင် ပညာဆည်းပူးသည်။ ၁၈ နှစ်သား အရွယ် ၁၉၂၅ တွင် အစိုးရ ပထမပြန်စာမေးပွဲ ပထမကြီးတန်း အောင်သည်။ ၁၉၂၇ တွင် ဟင်္သာတမြို့ ငွေတိုက် ဝန်ထောက် ဦးဖေသင်၊ ဒေါ်မမကြီး တို့က ရဟန်းဒါယကာ အဖြစ်ခံယူ၍ ရဟန်းဝတ်သည်။ ၁၉၂၈တွင် ပခုက္ကူမြို့ မဟာဝိသုတာရာမတိုက်သာသနာလင်္ကာရ ကျောင်းတွင် ပညာသင်ယူပြန်သည်။ တဖန် ဟင်္သာတမြို့၊ မြစ်ကွေ့ ကျောင်းတိုက် စတုတ္ထ မြစ်ကွေ့ ဆရာတော် ဦးပညာဝံသထံတွင် စာပေနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းနိဿရည်း ခံယူရင်း၊ တဖက်တွင်လည်း စာချဆရာတော်လေးတစ်ပါးအဖြစ် သံဃာတော်များကို စာပေပို့ချခဲ့သည်။ ဟင်္သာတခရိုင်၊ မယ်ဇလီကုန်းမြို့၊ တက်ဆိပ်ကျောင်းတိုက်တွင်လည်း စာပေပို့ချခဲ့သည်။ ၁၉၃၅ တွင် မန္တလေးတောင်ပြင် ထီးလင်း တိုက်တွင် သီတင်း သုံးပြီး စာချ ဆရာတော် အကျော်အမော် များထံ စာလိုက်သည်။ ၁၉၃၆ တွင် ငယ်ဆရာကို ကျေးဇူးဆပ်သည့် အနေဖြင့် သန်လျင်မြို့နယ် လဟာရက်ရွာကျောင်းကို 'ပထမပြန် စာသင်တိုက်' အဖြစ် ဖန်တီးရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း အကောင်းဆုံး စာသင်တိုက်များထဲတွင် ပါဝင်သည်အထိ ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ တွင် လူဝတ်လဲသည်။ ဒဂုန် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာသည်။ ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်း ရပ်သွားသောအခါ သုဓမ္မဝတီ ပုံနှိပ်တိုက် ပါဠိဆရာ (၂၃ မတ် ၁၉၅ဝ)၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဘာသာပြန်နှင့် စာအုပ် ထုတ်ဝေရေးဌာနတွင် စာပြုဆရာ (၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၅၂)၊ လက်ထောက် စာနည်း (၁၆ မေ ၁၉၅၉)၊ ၁၉၆၈ တွင် သက်ပြည့်ပင်စင်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် အထက်တန်းပညာဦးစီးဌာနတွင် ပညာရေးအထူးအရာရှိအဖြစ် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ကာ မြန်မာစာ ကော်မရှင်၏ မြန်မာအဘိဓာန်လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ဆောင်သည်။ မကြာမီ မြန်မာစာကော်မရှင် အဘိဓာန်ကော်မတီ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာသည်။ တဖက်တွင်လည်း မြန်စာပြန့် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်ပညာဌာန စာကြည့်တိုက်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်း၌ ပေပုရပိုက် ဆိုင်ရာ အချိန်ပိုင်း ကထိက အဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ကိုရင်ဘဝကပင် စာများ စတင်ရေးခဲ့သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၂၉၃ ခုနှစ်၊ နယုန်လထုတ် လယ်တီတရား သတင်းစာတွင်ပါခဲ့သည့် ကဗျာမှာ ရှေးဦးလက်ရာပင် ဖြစ်သည်။ ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာချုပ် လယ်တီ ပဏ္ဍိတ ဦးမောင်ကြီး၏ တပည့်အဖြစ်ခံယူကာ ဒဂုန်မဂ္ဂဇင်း ယုဝတီစက္ခုကဏ္ဍတွင် 'ဟင်္သာတ ခင်ညို' အမည်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဟံသာဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် တက်ခေတ်နီတိခေါင်းစဉ်ဖြင့် 'အရှင် တေဇော သာရ၊ မန္တလေးစာသင်သား' အမည်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုအခြေခံ ဝတ္ထုတိုများကို 'ဒဂုန် တေဇော' ကလောင် အမည်ဖြင့် လည်းကောင်း ဆက်လက်ရေးသားခဲ့သည်။ ပထမပြန် သဒ္ဒါ (၁၉၃၉)၊ တင်တင်မြ ဝတ္ထု [တတိယတွဲ] (၁၉၄၁)၊ လယ်တီ ဦးဇဋိလ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိကထာ (၁၉၄၈)၊ အခြေခံ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ (၁၉၆ဝ)၊ အနန္တ ကဗျာ (တကြိမ် ၁၉၆၂)၊ မင်္ဂလာ ကဗျာ (၁၉၆၅)၊ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ (၁၉၆၅)၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘာပြောခဲ့သလဲ (၁၉၆၅)၊ ဗုဒ္ဓ၏ ဩဝါဒအမြုတေ ['ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘာပြောခဲ့သလဲ' ကို ဖြည့်စွက် တိုးချဲ့] (၁၉၆၇)၊ ဗုဒ္ဓတရား [ဒု ကြိမ်တွင် 'ဗုဒ္ဓ၏ဩဝါဒအမြုတေ (၂)' ဟု ပြောင်း] (၁၉၆၇)၊ ပါဠိသက် ဝေါဟာရ အဘိဓာန် (၁၉၆၈)၊ ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့ (၁၉၇၃)၊ မဟာရာမ ဝတ္ထု (၁၉၇၃)၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကမ္မဝါဒနှင့် မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု (၁၉၇၇)၊ စကား (?)၊ ငါးပါး သီလ ကဗျာ (?) တို့်ကို ပြုစုခဲ့သည်။ သုဓမ္မဝတီ ပုံနှိပ်တိုက်အတွက် သုဓမ္မဝတီ အနှစ်ငါးဆယ် (၁၉၅၃)၊ မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းအတွက် သတ္တုရူပက ဝိလာသနိကျမ်း (၁၉၆၁)နှင့် ဒုတိယ တောင်ဘီလာဆရာတော် ဂုဏရံသာလင်္ကာရ ပြုစုသော အစိန္တေယျဝတ္ထု (၁၉၈ဝ) တို့ကို တည်းဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
၁၉၇၂ ခု အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်များ ဆေးရုံ၌ အသည်းကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ 
↑ ရာပြည့် ဦးစိုးညွန့် စုစည်း တည်းဖြတ်သော '၂ဝ ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ ၁ဝဝ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျုဉ်း' စာအုပ်(၂ဝဝ၅ ခု၊ ဇူလိုင်)
ပါရဂူ။ ပရကထာ (၁၉၉၈)။ စာ ၃၇၁-၃၈၅။
မလိခ။ မြန်မာ စာပေ အဘိဓာန် (၃)။ စာ ၁၄၇-၁၄၈။
မသွယ်သွယ်ခိုင် (သိပ္ပံဘွဲ့ - သင်္ချာ)။ ဒဂုန် ဦးထွန်းမြင့် စာစု စာရင်း (၁၉၉၇)။
သုတေသန စာစဉ် သမိုင်း/ စာရင်း/ စာတည်းများ (ဧပြီ ၁၉၇ဝ)။ စာ ရ၄ - ရ၅။
မင်းယုဝေ။ ဒဂုန် ဦးထွန်းမြင့်၊ ငွေတာရီ (နိုဝင်ဘာ ၁၉၇၂)။ စာ ၂၆-၃၁။
၂၄၊ ၃၊ ၉၆ နေ့ မယ်သီလှကန် ကျေးရွာတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဆရာကြီး ဒဂုန် ဦးထွန်းမြင့် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်စာတိုင် ဖွင့်ပွဲ အတွက် စာပေ ဒါန စာစောင်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထွန်းမြင့်၊_ဦး_(ဒဂုန်)&oldid=700787" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။